Wuru na-etu ọnụ Pt. 1 — njem Lee - Official Site
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị aha droppers. Ị ma onye m na-ekwu okwu banyere. Ndị mmadụ na-achọ ka unu mara na ha maara ndị na eleghị anya ị chọrọ ịmata. Mgbe m chere echiche "namedropper,"N'ebe ahụ bụ otu Ihọd na ozugbo na-echeta. M na naanị zutere ya a ọgụgụ dị nta nke ugboro, ma mgbe ọ bụla anyị na-ekwu, ọkara nke mkparịta ụka anyị ẹka ọtọ na oké aha tụlee.
Ọ maara ihe dị mma ọgụgụ nke "nnukwu oge" ndị, o nwere uche na-adịghị ike na-sinik aha ndị bụla mkparịta ụka. A bụ otu ihe atụ. m na-ekwu, "Hey nwoke, Kedu ihe na-akụ?"Ya reply: "Oh, ọ bụ ihe n'etiti-ehihie. -Echetara m na m na-egwuri putt putt na Michael Jackson n'etiti-ehihie na Paris. "Okwu?
-eme ihe n'eziokwu, Ọ bụghị naanị aha droppers na irk anyị bụ ezie na. Ọ bụ ndị na-etu ọnụ n'ozuzu. Anyị na-enweta ike gwụrụ nke na-anụ toro ikom etu ọnụ banyere ha n'ụlọ akwụkwọ dị elu football ụbọchị (ọ bụ oge ịga na na, sir). Anyị agwụ nke anyị ùgwù enyi na ga-esi tweet banyere bụla osisi na ebe ha na-eleta. Na anyị enweghị ọtụtụ ndidi maka ndị na-zuru ezu maka anyị ọ bụla dị oké ọnụ ihe ha na-azụta (ma ọ bụrụ na ha na rappers, n'ezie). Ma ọ bụ covertly na-etu ọnụ na-ị maara, ma ọ bụ unashamedly naegosi gị niile rụzuru, etu ọnụ dị nnọọ adịghị mma.
kwụsị etu ọnụ
nanị tinye, na-etu ọnụ bụ "okwu boastfully." Anyị nile anọwo na ikpe mara ya na ụfọdụ ebe. Mgbe ọ na-akpalite anya mpịakọta mgbe ndị ọzọ na-eme ya - n'ihi ya, gịnị mere anyị ka na-akụkụ na ya onwe anyị?
Etu ọnụ na-eme mgbe i nwere ihe (ma ọ bụ ime ihe) wee dị ịtụnanya na ị na-eche onye ọ bụla kwesịrị ịma banyere ya. Na bụghị nanị na ha kwesịrị ịma banyere ya, ha mkpa na-aghọta otú dị egwu ị na-maka inwe (ma ọ bụ na-eme) ọ. Ọ bụrụ na anyị na-agwa onwe ya eziokwu, anyị na-akpọ aha dobe ma dị umeala n'obi na-etu ọnụ na nke enyi anyị n'ihi na anyị chere na o na-eme ka anyị anya ọma. Na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere ọ bụ ihe ọjọọ.
Nke bụ nsogbu abụghị na ihe ị na-etu ọnụ abụghị oké. Ọ pụrụ ịbụ. Nsogbu bụ na ọgwụgwụ ihe mgbaru ọsọ ọ bụghị otú oké. Ihe ọ bụla ị na-eme n'ihi otuto onwe onye bụ mmehie.
Akwụkwọ Nsọ na-ekwu mara ezigbo ike maka ụdị na-etu ọnụ okwu. Otu ihe atụ bụ na 1 Ndị Kọrịnt 4:7, nke Paul jụrụ, "Gịnị ka i nwere nke ị na-anataghị anata? Ma ọ bụrụ na ị natara ya, ihe mere i ji na-anya isi dị ka ọ na-abụghị gị?"Ọ na-ihu ọma si, "Ihe niile i nwere e nyere gị. Ya mere, gịnị mere ị ga na-etu ọnụ mgbe nile i mere bụ na-anabata onyinye?"
Onye ọ bụla na-etu ọnụ okwu anyị na-ekwu bụ a shot iji kpọmkwem na Onye kere anyị. Ezi ihe nile si n'aka Ya, nke pụtara nweghị onye n'ime anyị nwere ike isi bute otuto maka ya. All ebube ka Universe bụ nke Chineke, ma anyị na-mgbe niile na-agbalị ịnọgide ụfọdụ maka onwe anyị. Na agụmakwụkwọ ụwa, anara otuto maka onye ọzọ ọrụ a na-akpọ plagiarism. Ke ata ụwa, ọ na-akpọ etu ọnụ.
malite etu ọnụ
Nke ọma nke na emen ya mgbe ahụ, nri? mgbe, mgbe na-etu ọnụ!
Echeghị m na ọ bụ ezi na mfe. Ọ bụghị nanị na m chere na i kwesịrị etu ọnụ mgbe ụfọdụ, M chere na ọ bụ ihe e kere gị ime. Ka m kọwaa.
Cheta, -akpata etu ọnụ na-eche echiche ihe i nwere bụ nke mere ịtụnanya na onye ọ bụla kwesịrị ịma banyere ya. Anyị bụ ndị na-gbapụtara agbapụta Jesus na-enwe ihe-etu ọnụ banyere - Chineke n'onwe Ya. Ọ bụrụ na anyị maara Chineke, anyị ga-mere blown pụọ site na ya ka anyị ji ekwusa mma ya ndị ọzọ (1 Pet. 2:9). Ọ dị oke oké na-na-onwe anyị. Jeremiah 9:23-24 chịkọtara ya nke ọma.
Nke a bụ ihe Jehova kwuru:
"Ka onye maara ihe ghara inya isi nke amamihe ya
ma ọ bụ nwoke ahụ dị ike ịnya isi nke ike Ya
ma ọ bụ ọgaranya na-anya isi nke akụ na ụba ya,
kama ka ọ na-anya isi nyaa isi banyere nke a:
na ọ na-aghọta na m maara m,
na Mu onwem bu Jehova, nwere obiọma na,
ikpe ziri ezi na ezi omume n'ụwa,
n'ihi na ndị a-atọ m ụtọ,"
Ọ bụrụ na ị maara Chineke, Achọrọ m ka ị na-etu ọnụ. Ma mgbe ị na-eme, ekwela ka ọ di nime gị amamihe, ma ọ bụ gị ike, ma ọ bụ gị àkù. Kama, -etu ọnụ banyere Ya. Obụre ke eziokwu na ị maara na One na amamihe zuru okè, ike nile, ike, na mgbe agwụcha akụ nke amara. Kama iji okwu gị iji nweta gị onwe gị na ama, eji ha na-egosi mmeri Ya.
The Universe dị ka a ngosi ikpe n'ihi na Chineke otuto. The Earth e kere na-egosi ike ya. Osisi e guzobere na-eji ya mara mma. Na ụmụ anụmanụ e deere na-arụtụ aka na ya ịdị ukwuu. Ma gị? Ị na-wuru na-etu ọnụ na Ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme dobe a aha, ka ọ bụrụ ya.
Aaron izu • August 19, 2013 na 6:09 pm • zaghachi
Nke a bụ n'ezie oké njem, na-ahụ gia ọrụ!
Erin • August 19, 2013 na 6:11 pm • zaghachi
a mara mma e dere. na-eme ka ọtụtụ uche. M hụrụ n'anya ka ogologo dị ka nke ọma. oké na ọ laa. ike na-eche na-agụ ihe, njem.
Justin Humphrey • August 19, 2013 na 6:32 pm • zaghachi
ekele Njem. Nke a bụ a n'ezie ezi uche. Anyị onwe anyị rụzuru tụnyere Chineke dịghị mgbe agwụcha amara abaghị uru. Ka anyị na-amalite etu ọnụ banyere Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta!
Kelcie Sthran • August 19, 2013 na 6:35 pm • zaghachi
Nke a bụ magburu onwe Njem! The ọhụrụ na saịtị anya ịtụnanya!
Melody • August 19, 2013 na 7:04 pm • zaghachi
Chaị. dị ike. Tweet, share, email!
Jay • August 19, 2013 na 7:14 pm • zaghachi
Ọ dị ihe m nnukwu na-eso gị!! Ya mere,, M na-eso abụọ ndị a 18 afọ Kraịst on YouTube, Instagram&Twitter na ọnwa na ụbọchị abụọ gara aga, ha kwuru na ha na-gwara ndị Chineke na-ahapụ NC na-aga Los Angeles. Ha rutere ụnyaahụ!!!! akụkụ kasị ukwuu?!! Ha hapụrụ NC na nke Iri na Isii dollars, a azụ mkpọ na okwukwe ha na malitere ije ije!!! N'ụzọ, e nyere ha anyịnya igwe, mgbe ahụ nri, ndo, agafe &ego iji nyere aka na njem ha. Ma ha egeghị ọbụna ịrịọ maka ya!!!!! Ndị mmadụ ga-dị nnọọ rigota ha na-enye. Dị ka ha nwere ike ịhụ mmụọ Chineke nile ha!! Ha dere vids na ụzọ on YouTube na posted photos on Instagram na ha na-anyị ruo ụbọchị on ha twitter dị ka nke ọma. Ha YouTube bụghị e emelitere ke otu izu ma ha ka nwere ebube àmà òkè na e si ofụri njem ha imelite ha twitter na Instagram fọrọ nke nta DAILY. Dị nnọọ chọrọ na-agbasa a na gị ka i wee pụrụ ịgbasa a oké ozi ọma nke Okwukwe. Ma eleghị anya, ị pụrụ ọbụna esi na kọntaktị na ha na-agbalị ha mmụọ. Ndị ikom a na Chineke bụ legit. ịtụnanya àmà. -Ahapụ gbasara ozi ọma!
ha YouTube: YouTube.com/Livin4Christ4Lyfe
ha Instagram: Livin4Christ4Lyfe
ha Twitter: Liv4Christ4Lyfe
-Agọzi nwa-nne-!! Nke a ụba okwukwe m ihe atụ anya na ọ enwekwu gị kwa!!
Ben Sudderth III • August 19, 2013 na 7:17 pm • zaghachi
M enwe mmasị ịgụ gị blog. Ọ bụ na-akpali ma mfe nghọta. Idebe-eme ihe gị na-eme!
-Enwe Chineke Ngọzi
David Gaines • August 19, 2013 na 7:18 pm • zaghachi
Ee dị ka ụmụ Chineke anyị na-wuru iji na-etu ọnụ banyere ike ya dị ebube, n'anya, ebere na amara ya site karịsịa. Jehova na-ekwu,, Ọ bụrụ na onye ọ bụla anya isi ka Ya-anya isi n'ime Onyenwe. Okwu Swag pụtara na-na-anya isi ma ọ bụ na-etu ọnụ nke bụ mpako ihe na-eme mgbe ị na-eme ka ọ niile banyere gị. Mgbe ọ na-abịa swag, ụwa setịpụrụ ụkpụrụ, ha na-agwa ndị mmadụ whats na-emekarị ma ọ bụ ihe jụụ ma ọ bụ. Onye na-Kraịst bụ ndị kasị ewu ewu ihe na-na ọha mmadụ na ụbọchị ndị a, ma ọ n'ezie bụ ihe kasị mkpa. Dị ka a Christian ya zuru okè ka anyị nwee swag, ndị kasị mma swag, na WTF a Nsọpụrụ Swagg nke pụtara nanị na-anya isi na Jehova bụ Chineke. Anyị ije, anyị okwu, na site na anyị music anyị na-anya isi na-etu ọnụ na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n'ihi na site na cross anyị aghọwo ngwaahịa nke Ya Grace na ọ bụ ndụ anyị ozi iji merie ihe mkpụrụ obi site ikwusa ozioma nke amara.
Malemaadutse • August 19, 2013 na 7:24 pm • zaghachi
Daalụ maka nba-nne-I'm ikpe mara nke na-etu ọnụ. Ga-eme ka mma echi.
Sarah • August 19, 2013 na 7:38 pm • zaghachi
Nnọọ na-ekweta na ị! Dịghị mgbe m chere nke ịbụ “wuru na-etu ọnụ” ma ị maa mere ka m kwenyesie. M nke ukwuu inwe mmasị n'ịgụ gị ide. Incredibly chere akpali iche ma echiche kwesịrị ekwesị na agbamume. Zuru okè ngwakọta nke abụọ!! Daalụ maka ide.
Jay • August 19, 2013 na 8:08 pm • zaghachi
Amen. Nke a bụ na mgbe Tripp. Daalụ maka ịbụ ngọzi. #SpiritLed #BragOnMyLord
KARLONBURKETT • August 19, 2013 na 9:31 pm • zaghachi
Enwere m ike na-etu ọnụ na m Jehova?
KARLONBURKETT • August 19, 2013 na 9:32 pm • zaghachi
“Anyị na-enweta ike gwụrụ nke na-anụ toro ikom etu ọnụ banyere ha n'ụlọ akwụkwọ dị elu football ụbọchị (ọ bụ oge ịga na na, sir).” #Preeeach!
KGRANT • August 19, 2013 na 10:00 pm • zaghachi
M sụọ ngọngọ n'elu isiokwu a na nwa na-enweghị, eme m Obi. Nke ukwuu iji tụgharịa uche site n'okwu ndị a. Ọ bụ ma ihe agbamume na a mkpa na-enyocha onwe ya na ebumnobi. Otuto dịrị Chineke maka enye gị onyinye dee ihe a!!!
Terrence • August 19, 2013 na 11:01 pm • zaghachi
Great Job Njem! Hụrụ n'anya na-audio mpempe. Mgbe hụrụ na tupu! Ọ na-echetara m oge m eyịride na… Na-egwu egwu! Great n'inye ndụmọdụ.
Langston • August 20, 2013 na 1:10 Abụ • zaghachi
Awesome post, njem! ahụrụ m nke a n'anya. Ume ugbu a. Daalụ maka irubere na-ekwe ka Chineke na-ekwu okwu site na gị!
India • August 20, 2013 na 1:35 Abụ • zaghachi
Ịrịba òkè Mr. njem!!! Ya mere, dị ike ma na-akpali akpali!
James • August 20, 2013 na 4:34 Abụ • zaghachi
Ya mere, oké ịhụ Njem ka na-ekwukwa eziokwu ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ a na-ajụ dị iche iche karịa music. Nke ahụ bụ nnukwute agụ, Ana m atụ anya na-anụ ihe nke ọ. Chukwu gozie gị, njem.
Reggie • August 20, 2013 na 8:53 Abụ • zaghachi
M nwetara ụfọdụ ihe na-agbanwe.
Aubrey • August 20, 2013 na 10:35 Abụ • zaghachi
N'anya mfe nke ozizi – mara mma
Mallory • August 20, 2013 na 10:38 Abụ • zaghachi
Ị pụrụ biko narrate ihe nile site ugbu a?
broChris • August 20, 2013 na 10:40 Abụ • zaghachi
Great echiche nkpasu-iwe-agụ Mr. njem. Ọtụtụ nwere ike iburu nke a n'uche, na now n'ime omume. Na-eji onyinye a Chineke nyere gị, nke ugbu a gụnyere a mara mma oké so dee, na-anọgide na-ịkekọrịta ozi na onyinye ndị ahụ… ọ na-eru ihe karịrị ị ga-amata. Chukwu gozie, #JesusIsKing
Jose • August 20, 2013 na 10:44 Abụ • zaghachi
Billy • August 20, 2013 na 10:59 Abụ • zaghachi
Great isiokwu. Nke a nyere ụfọdụ miri emi nghọta m na-enyeghị n'uche tupu. Ana m atụ anya ka Part Abụọ! Dị nnọọ mere nke ọma.
PhillipHolyApostleMurphy • August 20, 2013 na 12:24 pm • zaghachi
Dị nnọọ mma ozi… Gọziri agọzi ịnụ Onyenwe anyị na-ekwu okwu site… Chineke anyị dị ukwuu!!!! Chineke anyị dị mma!!!! Ọ bụ ya mere egwu!!!
okaro Rex • August 20, 2013 na 12:26 pm • zaghachi
A oké mpempe. Ka Ezi etu ọnụ amalite.
Dri • August 20, 2013 na 2:53 pm • zaghachi
M digs a.
Mareesa • August 20, 2013 na 2:58 pm • zaghachi
oké iche echiche :)
IsaacD • August 20, 2013 na 3:15 pm • zaghachi
Nke a bụ oké isiokwu, nke ọma dere, na m n'ezie hụrụ n'anya ọdịyo akụrụngwa gị atụkwasịkwara ya. I meela nke oma maka-ekere òkè na nke a.
Amber • August 20, 2013 na 7:01 pm • zaghachi
Ọtụtụ mgbe m na-eme nke a; etu ọnụ. Ọ bụ ihe a echiche nke nganga na anyị na-n'elu anyị ịrọ arọ obi. N'ihi ihe ụfọdụ na-enye Chineke otuto n'ihu ndị na-abụghị ndị kwere ekwe pụrụ isi ike ma ọ bụ nanị n'ihi nganga.
Nso nso m gbatara nnọọ elu mgbe m re-were ASVAB. Enwere m oké mkpali n'ihi na m maara na Chineke nyeere m na-eme ya. Ihu ọma ya bụ ihe m nyere m na akara na ihe ọmụma Ọ na-etinye na m nyeere m aka n'ezie ịghọta mgbakọ na mwepụ arụmarụ dịghị mgbe m nwere ike ịghọta ihe n'ihu. Ma mgbe m nwetara azụ m unit m gwara onye ọ bụla ihe m nwetara na obi ụtọ ma mgbe e mesịrị na m nwere obi mara ikpe n'ihi na m maara na m ga naanị gwara ndị m maara bụ ndị kwere ekwe na ọ bụ ihe niile Chineke. Na-ekweghị ekwe dịghị mgbe m gwara m àmà.
M na-eme nga ozi na Sunday na ọ bụ weird n'ihi na mgbe m na ha n'ihu m nwere ike na-eche na-erughị ma ọ bụrụ na ha na-eche na m na oké ịnụ ọkụ n'obi ahụ mgbe m na-arụ ọrụ m n'aka ike bugota aha. Onye ọ bụla maara na m na a Christian ma ọ dịghị nke ha nwere ihe ọ bụla ntụzi-aka otú Ọ bụ ihe niile ahụ bụ na uche m 24/7.
Aga m na-arụ ọrụ na nke a. Daalụ maka nkekọrịta.
ofufe • August 20, 2013 na 9:12 pm • zaghachi
U dị nnọọ gbanwere ndụ m Njem. Biko ị na-enweta ọnwa ike nd vison…. Daalụ
Alejandro • August 20, 2013 na 9:36 pm • zaghachi
njem , Chineke na-agọzi gị nwoke !
Nke a dị mkpa dị ka a na-echetara na n'ihi na m na-ekele unu, ikwe Chineke na-eji gị na-eje ozi. Anyị defiantly nwere ihe kasị mma na-etu ọnụ banyere.
Tiffanie • August 20, 2013 na 9:42 pm • zaghachi
Nke a bụ egwu! ekele Njem. M n'anya otú gị ka na-atụnye ihe ọmụma na anyị na a obere ego nke oge :)
BrantPhelps • August 21, 2013 na 10:17 pm • zaghachi
Nke ahụ bụ ezi ihe stof, njem… Ihe nile anyị nwere na-enye anyi ya pụtara ìhè na Awesome Okike Chineke onye bụ ọnụ ahịa na-etu ọnụ!
Isaac • August 22, 2013 na 10:04 Abụ • zaghachi
Ana m tụrụ na otú i inter-metụtara ndị ochie na ndị ọhụrụ testatment iji nyere anyị aka ịghọta ihe ize ndụ nke braging on onwe anyị!! Ihe a ọ bụ n'ike mmụọ nsọ n'ihi gị na-adịbeghị anya track “Oké ọnụ on Chineke m”???
M n'anya gị music coz ya otú mkpa!! Chukwu gozie gị!! Na-elu na-arụ ọrụ ọma!!
Jay • August 22, 2013 na 8:31 pm • zaghachi
Cheta-enweghị ebe obibi Kraịst na m gwara unu banyere? Ha chọrọ enyemaka.. Enyemaka ọ bụla ga-abụ ụmụ okorobịa ọma. Chineke ga-egbo ma ọbụna Jesus apụghị ime ọrụ ebe e nweghị okwukwe. Onye ọ bụla na LA na-mbịne ha Akwadoo n'ihi enweghị okwukwe ha. -Ahapụ akwado alaeze ahụ na-enye ihe anyị nwere ike. Ha na-eme music na Mọ n'ezie na-ekwu okwu na ha lyrics. -Ahapụ agbasa na dị ka nke ọma! Anyị na-eme nke a n'ihi na ala-eze y'all. email livin4christ4lyfe@gmail.com .. -Ahapụ enyere umu-nna-. Gị n'anya niile.
Jessica • August 26, 2013 na 9:36 pm • zaghachi
Awesome Blog ekele gị nwe-ayi maka ndisua nnọ m site na nke a Blog, a chọrọ m na-amalite braggin on Onyenwe m Hallelujaah! :-)
ata aru • August 28, 2013 na 12:39 Abụ • zaghachi
N'anya n'ezie ọrụ ị na-eme. -agọzi na a oké ụzọ site n'ozi gị
aha: njem Lee • Wuru na-etu ọnụ Pt. 2
aha: njem Lee • etu ọnụ Wallpaper
Terence • April 9, 2014 na 2:11 pm • zaghachi
dị ike! Ị mebiri a ala na mfe. Nke ukwuu amamihe n'ihi na a nwa okorobịa. M na-ekpe ekpere na ma gị na ezinụlọ gị. Gị onyinye ga-eme ka ụlọ maka gị. Nanị na ihe Chineke na-akpọ gị ka i mee, i nwere Oil, Mmụọ Nsọ Ya. Udo na ọganihu gị (Shilom)!